Ungasibhala njani isicatshulwa esifanelekileyo kwiYunivesithi 2022
Septemba 14, 2021 U-Okpara Francis
Ukubhala isincoko kulula. Kunene? Ewe, akuninzi. Ukubhalwa kweYunivesithi kunemigangatho ephezulu ethi ngamanye amaxesha icelomngeni ukuyifezekisa, kwaye ngoxinzelelo kunye noloyiko lokushiyeka ngasemva, ukuqonda apho ungaqala khona kungangumsebenzi otyhafisayo. Sinesikhokelo esincinci sokukunceda ubhale amaphepha akho eyunivesithi ngcono ukuba ufunda phesheya.
Ke, kuya kufuneka ubhale isincoko sokwenyani ukusuka kwasekuqaleni kwiprofesa yakho engqongqo, kwaye unokuziva uloyiko xa ucinga ngalo. Sukuba nexhala.
Ngokwesiqhelo, xa abafundi bebona imiyalelo yephepha, baziva benyanzelekile ukuba bacinge kwangoko kwaye balahleke kuluhlu olude lweemfuno. Sukwenza lonto; qala kancinci. Skim yonke imiyalelo yemiyalelo okanye amaphepha kwaye ufumane ukuqonda ngokubanzi malunga nexesha elingakanani onokufuna ngalo ukuqonda ukuba kuqhubeka ntoni.
Ukuba ufuna ixesha elininzi, yiya ikomityi yekofu. Okokuqala, funda umbono ophambili wephepha. Mangaphi amaphepha ekufuneka ubhale kuwo? Kufuneka wenze ntoni? Ngaba uprofesa wakho ufuna ukuba ucenge, ubonakalise, uhlalutye, ushwankathele, okanye ubonise ulwazi?
Emva kokuba ufumane olona luvo lubalulekileyo, ungangena kwiinkcukacha. Musa ukukhathazeka kwaye ucinge ngayo ngaphandle kweemvakalelo; Yiba nenjongo. Nje ukuba unawo wonke umfanekiso-ngqondweni, uya kuziva ukhululekile ngengcinga.
Nxibelelana noonjingalwazi bakho
Umcebisi wakho unokubonelela ngoncedo lwakho ukuba unemibuzo eseleyo. Utitshala wakho yingcali yekholeji ekhokelayo onokuyithemba, ukuze ke ukwazi ukufikelela kubo ukuze ufumane uncedo. Sukubuza imibuzo enje, "Kufuneka ndenze ntoni?" okanye, "Ubhala njani isincoko?". Buza imibuzo ekhethekileyo kunye nengqalileyo kwaye ungathandabuzi ukuvuma ukuba awazi nto.
Ukuba uthathe isigqibo sokubhala iphepha, fumana inkuthazo kwaye uqokelele ulwazi oludingayo ukuze ufumane umbono wento ekufuneka uyenzile. Cela oontanga bakho okanye oonjingalwazi baseyunivesithi ukuba babelane nawe ngeesampulu ezilungileyo, okanye ujonge kwi-Intanethi. Nangona kunjalo, kukho umngcipheko wokuba uza kufumana into engaphantsi komgangatho ophezulu.
Ukuba uziva ubambekile, ungayalela iphepha elilelakho kwinkonzo yokubhala eyiyo, njengeCustomWritings yokuqhubekekaNdibhalele izincoko”Isicelo. Ezi nkonzo zokubhala kwizifundo zibonelela ngenkxaso kwizifundo ezivela e-UK, e-USA, nakwamanye amazwe athetha isiNgesi.
Iinkampani ezininzi zibonelela ngeenkonzo zokubhala ngokwesiko kwaye zinamava amahle okusebenza kunye nabathengi abahlukeneyo. Baya konwaba ngakumbi ukukunceda uthenge isabelo njengesampulu onokuthi udibane nayo.
Uninzi lwezincoko ziqala ukoyikisa abafundi xa kufikwa kumba wolwakhiwo lomsebenzi. Ukuba awunalo uluvo lobume bomsebenzi, eli candelo liya kuba luncedo kuwe.
Isincoko ngasinye siqulathe intshayelelo, imihlathi yomzimba, kunye nesiphelo. Intshayelelo kunye nesiphelo akufuneki kubekude kakhulu: malunga ne-10% yephepha lilungile. Umthetho wegolide kukunikezela umhlathi omnye kwisihloko esinye. Ngale ndlela, ukubhala kwakho kuya kulungelelaniswa kakuhle. Thatha nje isiqwenga sephepha ubhale ulwandlalo oluncinci ngentshayelelo, isiphelo, kunye nezihloko eziphambili ofuna ukuxoxa ngazo.
Imiyalelo yakho sele iwukhankanyile ubalo lwamagama, ukuze ukwazi ukubala ukuba ingakanani ingcaciso oyibhalileyo kumhlathi ngamnye. Khupha inani lamagama okwazisa kunye nokuqukumbela kwaye ushiye amanye kwimihlathi yomzimba wakho. Emva koko, hlula ubalo lwamagama ngenani lamacandelo, kwaye uya kufumana inani eliqikelelweyo lamagama kumhlathi ngamnye ukuze bajongeke belingana.
Isiqendu ngasinye sinesivakalisi sesihloko esixelela umfundi ngombono ophambili. Izivakalisi ezilandelayo kufuneka zibonise uluvo lombhali kwaye zixhase ibango.
Isiteyitimenti sengcaciso yenye yezona zinto zibalulekileyo zomsebenzi wakho kuba uphendula umbuzo obuzwe ngumbhali. Nangona kunjalo, ababhali abaninzi bakufumanisa kunzima ukuyenza inyanzelise. Bhala ingxelo yethisisi xa sele ugqibile ngayo yonke enye into.
Umzekelo, ukuba ububhala malunga nokufudumala kwehlabathi, yithi into enje, “Oonobangela abaphambili bokushushubeza kwehlabathi kukutsha kwamafutha, ukugcwala kwabantu kunye nokulima.” Sukubhala ngokungathi uza kunika impendulo ephepheni, nangona kunjalo. Nika yona ithisisi.
Isingeniso kufuneka sikhokele umfundi wakho kwingxaki ocinga ukuyiveza, kwaye isiphelo sichaza iingxoxo esele zenziwe kwaye zivumela umfundi ukuba aqonde ukuba kutheni lo mbandela ubalulekile.
Ngokwesiqhelo, abanazo iikowuti okanye ulwazi olutsha. Nangona kunjalo, intshayelelo inokuba nekhonkco lokubamba ingqalelo yomfundi.
Khetha imithombo yolwazi
Inkxaso yeyona nto iphambili ekubhalweni kwakho kuba yenza iphepha lakho lithembeke kwaye lithembeke. Wonke umbhali olungileyo uqokelela ulwazi phambi kokuyila ingxoxo. Eyona nto imbi onokuyenza kukudala uluvo malunga nento kwaye ufumane ubungqina obunguziro. Ke, qala ngokukhangela ulwazi kwi-intanethi okanye kwithala leencwadi laseyunivesithi.
Amanqaku aphononongwe ngoontanga
Iincwadi ezipapashwe ziiyunivesithi okanye imibutho esemthethweni
Iiwebhusayithi ezinemimandla ethembekileyo
Khumbula: uhlala ugcina isincoko sakho siyintsusa. Ungalusebenzisa ulwazi oluvela kwimithombo kodwa uyishwankathele kwaye ucaphule umba ongengowakho. Zininzi izinto ezivavanywa simahla ezenziwa ngoontanga kwi-intanethi.
Google Scholar yenye yemithombo esetyenziswa ngokuxhaphakileyo yokufumana amanqaku eendaba. Unokuxhomekeka kwimithombo ethile ehlawulelweyo, njenge-EBSCOhost, i-JSTOR, kunye ne-Muse yeProjekthi. Ukuba imiyalelo yakho ifuna ukuba usebenzise ilayibrari yaseyunivesithi, qiniseka ukuba ufumana lonke ulwazi ukufikelela kuyo.
Jonga ulwimi lwakho
Xa ubhala uphononongo kwiphepha lakho, unjingalwazi wakho uya kuthi enze ugxininiso olukhulu kulwimi. Kukho umahluko obonakalayo phakathi kwesichazi-magama esisemthethweni nesingacwangciswanga, kwaye abantu abaninzi abangaqhelananga nokubhalwa kwezemfundo benza iimpazamo ezifanayo. Ke, zeziphi iziseko?
Yiba nenjongo. Soloko ungakhethi cala kwaye uzame ukungazichaphazeli iimvakalelo zomfundi wakho.
Sukusebenzisa ukusikwa. Sebenzisa ukucaphuka kuyinto eqhelekileyo ekubhaleni ngokungekho sesikweni, kodwa ukubhala ngokusesikweni kufuna ukusebenzisa ifom epheleleyo yamagama akho.
Ulwimi olungakhethi cala. Sukusebenzisa amagama anokubonisa naluphi na uhlobo lwentiyo kwaye usoloko ubhekisa ebantwini ngaphandle kolwimi lwesini.
Kuphephe ulwimi ngokweemvakalelo. Kwindlela yokufunda, uninzi lwababhali luzama ukungavakali kakhulu ngokweemvakalelo, ngaphandle kwezincoko zokucinga.
Gwema amagama alula kakhulu. Ukwenza ukuba izandi zigqithise akukho semthethweni, ngakumbi kumfundi waseyunivesithi.
Ngoku uyazi ukuba ungazibhala njani izincoko ezilungileyo kwaye uyiqonde ngcono into oyenzayo. Qiniseka ukuba ucwangcisa kwangaphambili kwaye usebenzise olu luhlu lulula ukuze uzive ukhululekile ngokubhala eyunivesithi. Ukufundisisa phesheya nceda ukhumbule: okukhona ubhala, kokukhona iitekisi zakho ziya kuba ngcono.
Post Previous:Ngaba silandela indlela echanekileyo yokuthatha ikhefu phakathi kwezifundo? Ukuba akunjalo, jonga apha
Okulandelayo Post:Idiploma yasimahla yamabanga aphakamileyo yesikolo kwi-Intanethi ngaphandle kweNdleko yaBantu abaDala